ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မြွေ ရဲ. ကျွမ်းကျင်ပါးနပ်စွာ သားကောင်ဖမ်းတဲ့ video ဖိုင် | Buzzy
ဒီစပါးကြီးမြွေ ဟာ အမေဇုံသစ်တောထဲမှာ နေုထိုင်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ ရှိရပြီး
ယခုတွေ့ရှိရသော မြွေကြီးနှင့်အတူ အခြားသော စပါးကြီးမျိုးစိတ်များလည်း ရှိနေသေးကြောင်း
ဒီစပါးကွီးမွှေ ဟာ အမဇေုံသဈတောထဲမှာ နထေိုငျကွောငျးရှာဖှတှေေ့ ရှိရပွီး
ယခုတှရှေိ့ရသော မွှကွေီးနှငျ့အတူ အခွားသော စပါးကွီးမြိုးစိတျမြားလညျး ရှိနသေေးကွောငျး
မြွေကြီးကို အဝေးကနေမြင်ရတာ ဖြစ်သည့်အတွက် အကောင်သေးသေးလို့ ထင်ကြပေမဲ့ တကယ်
တော့အလွန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မြွေကြီးဖြစ်ပြီး မတိုင်းတာခင်မှာ ၁၁ ပေ ၁၂ ပေ ခန့် သာ ရှိတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီမြွေကြီးရဲ. အရှည် ဟာ ၁၇ ပေခန့် ရှည်လျားပြီး အလေးချိန်အားဖြင့် ၂၁၅ ပေါင်ခန့် ရှိသည်။
ဒီိလေ့လာမှုတွေကို ဥရောပနဲ့ အမေရိကမှာရှိတဲ့ ပညာရှင်တွေက စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ
မွှကွေီးကို အဝေးကနမွေငျရတာ ဖွဈသညျ့အတှကျ အကောငျသေးသေးလို့ ထငျကွပမေဲ့ တကယျ
တော့အလှနျကိုကွောကျစရာကောငျးတဲ့ မွှကွေီးဖွဈပွီး မတိုငျးတာခငျမှာ ၁၁ ပေ ၁၂ ပေ ခနျ့ သာ ရှိတယျလို့ ထငျရပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီမွှကွေီးရဲ. အရှညျ ဟာ ၁၇ ပခေနျ့ ရှညျလြားပွီး အလေးခြိနျအားဖွငျ့ ၂၁၅ ပေါငျခနျ့ ရှိသညျ။
ဒီလလေ့ာမှုတှကေို ဥရောပနဲ့ အမရေိကမှာရှိတဲ့ ပညာရှငျတှကေ စုပေါငျးလုပျဆောငျခဲ့ကွ